RIP: Ebe nchekwa data gị niile bụ nke Matt | Martech Zone
Thursday, June 17, 2010 Tọzdee, Ọktoba 29, 2015 Douglas Karr
Teknụzụ teknụzụ tufuru onye pụrụ iche ụnyaahụ, enyi Matthew S. Theobald. Matt bụ onye dị ịtụnanya ma nwee ọgụgụ isi, na-emepe ma na-echekwa ụzọ iji depụta data nke ụwa site na Internetntanetị. Edere m banyere Ntinye mgbe ha zutere Matt mgbe ihe omume Indiana nke dị obere na Indiana n'afọ gara aga.
Matt nwere ọhụụ ma gbasie ike na-achụ ya. Oge ikpeazụ m hụrụ ya, ọ na-ama jijiji na-ese anwụrụ ọkụ na gburugburu. Amatara m ya ma anyị na-ekwu okwu banyere ọhụụ ya, ezinụlọ ya, Indianapolis ma kesara ụfọdụ akụkọ nzuzu. Anyị chịrị ọchị. A awa ole na ole mgbe e mesịrị, m ụgbọala ya n'ụlọ na nwere kọwaara ụmụ m ihe mere m 4 awa mbubreyo. Matt bụ ụdị nwoke ahụ - ọ kpọbatara gị ma ị nweghị ike inyere ma ọ dị gị ka ịnwere enyi ochie gafere tebụl n'aka gị.
Aga m echefu ịnụrụ olu anwụrụ ọkụ Matt, ụkwara ma na-achị ọchị na mmemme ọzọ anyị ga - eme. Amaara m na ọ gbalịsiri ike n'oge ụfọdụ, ọ nọ naanị ya na ọgụgụ isi ya ma enweghị nkwado sitere na ya iji nyere aka mee ka ọhụụ ya. Amatakwara m na ọhụụ ya ga- bụrụ eziokwu, m gwara ya na oge ọ bụla anyị kwuru okwu. O nwere ike ọ gaghị abụ ọnụọgụ Nchọgharị Nchọgharị Ntanetị nke na-abịa na mkpụrụ, mana usoro dịka ya maka ịhazi data n'ofe ịntanetị ga-abụ eziokwu ụbọchị ụfọdụ.
Matt hapụrụ m ozi ole na ole na Facebook iji zukọta ma soro ya rie nri ehihie. Anaghị m enwe ohere zuru oke, n'agbanyeghị nke ahụ, ọ nweghịkwa mgbe anyị jisiri ike zukọta. N’ụbọchị Mọnde, m ga-ewepụta oge iji sị enyi m.
Matt olili ozu bụ Monday 6/21, 12PM, Crown Hill Ili ozu North Entzọ mbata. (Ebe a na-emebe ili ozu 223)
Echiche dị n'elu
Matt na m nwere oge ịhọtara iji zukọta maka kọfị na Thursday. Obi dị ya ụtọ banyere akwụkwọ ọhụrụ m a, aga m enyefe ya otu.
Echere m na ọ bụ ihe ijuanya na ọ bịaghị, na-atụle ịnụ ọkụ n'obi ọ na-emebu. Echere m na ọ ga-enwerịrị ihe jikọrọ ya na m ga-alaghachi n'izu na-abịa.
Ndo, anyị agbaghara eachother, Mat. Agam abiakwa ikwu uka na Monday.